महिनावारीमा सेक्स गर्न हुन्छ कि हुँदैन ?
महिनावारी भएको बेलामा सम्भोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा अझै पनि केही भ्रम पाइन्छन् । महिनावारीका बेला सम्भोग गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा बलियो छ । पर सरेको बेला बार्ने या चोखोनितो गर्ने संस्कार भएको समाजमा महिनावारीको समयमा सेक्सलाई वर्जित नै गरिन्छ ।
अमेरिकामा हालै गरिएको अनुसन्धानअनुसार महिनावारीको बेला सम्भोग गर्दा महिनावारीको समय पनि कम हुने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । चरम यौन आनन्दमा महिनावारीको रगत छिटो योनीबाट बाहिर निस्कने हुँदा अरू बेलाको भन्दा महिनावारीको समय छोट्टिने जानकारी दिइएको छ । यो सामग्री हामीले शुकबारबाट लिएका हौँ ।
प्रकाशित : शनिबार, फागुन २६, २०७४२०:०१
होलीमा आफ्नो सुन्दरतामा ग्रहण लाग्नबाट जोगाउन लगाउनुहोस यी खास चिजहरु
छोरी बिग्रिनबाट कसरी जोगाउने ?
कसरि बनाउने प्याजको चिया? क्यान्सर,सुगर,अनिद्र आदि रोग निको बनाउन कसरि प्रयोग गर्ने??
किशोरावस्थामा नै यौनसम्पर्क राखे हुन्छ यस्तो घातक रोग लाग्ने खतरा !
घरमै यी मध्ये कुनै पनि प्राकृतिक तरिकाले अनुहारको दाग सजिलै हटाउन सकिन्छ ! हेर्नुहोस्